China 321 eshushu liqengqiwe insimbi coil ukwenziwa kunye mveliso | IHuaxiao
Insimbi engenasici engama-321 yintsimbi eyomeleleyo, enganyangekiyo kumaqondo obushushu aphezulu kune-316L. Inokumelana okungcono kokubola kwi-organic acid kwiindawo ezahlukeneyo kunye nakumaqondo obushushu ahlukeneyo, ngakumbi kwimithombo yeendaba ye-oxidizing. I-321 insimbi engenasici ihlala isetyenziselwa ukwenziwa kwemibhobho, izikhongozeli ezinganyangekiyo i-asidi kunye nezixhobo ezinganyangekiyo.
Sino Stainless Capacity malunga Ngama-321 / 321H Kushushu uqengqele coil insimbi , I-HR1 / 321 / 321H
321 Ibanga elinye ukusuka kumgangatho welizwe ohlukileyo
Icandelo le-321 yeChemical ASTM A240:
C：≤0.08 ，Hayi ：≤0.75 Mnu ：≤2.0 ，Kr ：17.0～19.0 ，Ni ：9.0～12.0，　S ：-0.03 ，P ：.0.045 N: 0.1, Ti: 5X (C + N) Min～ Ubungakanani
Icandelo le-321H yeChemical ASTM A240:
C：0.04～0.1 ，Hayi ：≤0.75 Mnu ：≤2.0 ，Kr ：17.0～19.0 ，Ni ：9.0～12.0，　S ：-0.03 ，P ：.0.045 N: 0.1, Ti: 4X (C + N) Min～ Ubungakanani
Ipropathi ye-321 / 321H ye-ASTM A240:
Inkcazo malunga ne-321 / 321H insimbi engenasici kunye nokuthelekisa ne-304 yesiqhelo
Zombini ezingama-304 kunye nama-321 zingama-300 eziziingcingo ezingenazintsimbi kwaye zinomahluko omncinci kukumelana nokubola. Nangona kunjalo, kwiimeko ezinganyangekiyo kubushushu obungama-500-600 degrees celcius, kusetyenziswa izinto ezingenasici ezingama-321. Ukongeza, intsimbi enganyangekiyo bubushushu yenziwe ngokukodwa kumazwe aphesheya kwaye ibizwa ngokuba yi-321H. Umxholo wekhabhoni uphezulu kancinane kunowama-321, ofana nowasekhaya 1Cr18Ni9Ti. Inani elifanelekileyo le-Ti longezwa kwi-stainless steel ukuphucula ukumelana kwayo nokubola okungaphakathi. Oku kungenxa yokuba kwinqanaba lokuqala lokuveliswa kwentsimbi engenasici, kuba itekhnoloji yokunyibilikisa yayingekonelanga ngokwaneleyo ukunciphisa umxholo wekhabhoni kwintsimbi, yayikukuphumeza oku ngokongeza ezinye izinto. Ngokuqhubela phambili kwetekhnoloji, kuye kwakho ukuveliswa kweekhabhoni ezisezantsi kunye ne-ultra-low-carbon carbon steel stainless. Ke ngoko, izinto ezingama-304 zisetyenziswe ngokubanzi. Ngeli xesha, iimpawu zokumelana nobushushu kwe-321 okanye i-321H okanye i-1Cr18Ni9Ti ziyabonakala.
I-304 yi-0Cr18Ni9Ti, i-321 isekwe kwi-304 kunye ne-Ti ukuphucula imeko ye-corrosular corrosion.
I-321 engenasici engenanto apho i-Ti ikhona njengento ezinzileyo, kodwa ikwasisinyithi esomeleleyo, ilunge ngakumbi kune-316L kubushushu obuphezulu. I-321 yentsimbi engenasici kwi-organic acid yoxinaniso olwahlukeneyo, amaqondo obushushu ahlukeneyo, ngakumbi kwi-oxidizing medium Ukuxhathisa kwe-abrasion elungileyo, esetyenziselwa ukwenza i-linings kunye nokuhambisa imibhobho yezitya ze-asidi ezinganyangekiyo kunye nezixhobo ezinganyangekiyo.
I-321 insimbi engenasici luhlobo lwe-Ni-Cr-Mo yentsimbi engenasici, ukusebenza kwayo kufana kakhulu ne-304, kodwa ngenxa yokongezwa kwe-titanium yensimbi, inokuchasana okungcono nomhlwa kunye nomda wobushushu obuphezulu. Ngenxa yokongezwa kwe-titanium yensimbi, ilawula ngokufanelekileyo ukuyilwa kwe-chromium carbide.
I-321 insimbi engenasici inoxinzelelo oluhle kakhulu lokusebenza kunye nokuchasana nobushushu obuphezulu (i-Creep Resistance) yoxinzelelo lweempawu zoomatshini zingcono kune-304 insimbi engenasici.
Egqithileyo Iikhoyili zentsimbi ezingama-310 ezishushu neziqengqelekileyo
Okulandelayo: Iikhoyili zentsimbi ezingama-410 410 ezishushu nezishushu